Wafdi uu hogaaminayo Prof. Jawaari oo goordhaw gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wafdi uu hogaaminayo Prof. Jawaari oo goordhaw gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay
Wararka naga soo gaaraya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa sheegaya in maanta ay halkaasi gaareen wafdi uu hogaaminayo guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Prof Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari.
Wafdiga gudoomiye Jawaari, waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo kusoo dhaweeyay mas’uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Odayaal dhaqameed, dhalinyaro, haween iyo xubno kale oo ka tirsan bulshada rayidka ah.
Ammaanka magaalada Baydhabo ayaa maanta si aan caadi ahayn loo adkeeyay, waxaana magaalada lagu daadiyay ciidamo aad u badan oo ka qeyb qaadanaya sugidda amniga ee magaaladaas.
Warar madax-banaan oo ay warbaahinta Bulshoweyn heshay ayaa sheegaya in uljeedka safarka gudoomiye Jawaari ee magaaalda Baydhabo uu yahay sidii uu u dar-dar gelin lahaa howlaha doorashada ee labada Aqal iyo sidii uu beeshiisa uga heli lahaa kalsoonida ah in xilka xildhibaanimo loo doorto.
Ugu dambeyntii, saacadaha soo socdo ayaa la filayaa inuu Prof. Jawaari faah faahin dheeraad ah ka bixiyo safarkiisa magaalada Baydhabo, isagoona sidoo kale ka hadli doono uljeedka safarkiisa ee uu maanta ku tagay halkaas.